Ha Kaliya Diirada Saarin Talooyinka SEO Iceberg | Martech Zone
Wednesday, September 7, 2011 Axad, Oktoobar 30, 2011 Douglas Karr
Mid ka mid ah shirkadaha SEO-ga ayaa ku haysan jiray sawir baraf baraha gurigooda. Waan jeclahay isbarbardhiga barafka marka ay timaado hagaajinta mashiinka raadinta. Wadahadal dhowaan aan la yeelanay macmiil ku saabsan soo noqoshadooda miisaaniyaddooda Wax-soo-Saarista Mashiinka ayaa leh walaac qaar ka mid ah in ay helayaan tiro kooban oo ka mid ah booqdayaasha gaarka ah sanadkii la soo dhaafay ereyga muhiimka ah waxaan bartilmaameedsanaynay, kor u qaadnay oo aan dabagal ku sameyn jirnay.
Ereyga furaha ahi waa mid gaar ah mana lihi ogolaansho aan kula wadaago…. laakiin dib u eegidooda Analytics, iyaga ahaayeen kaliya helitaanka faro ku tiris ah booqashooyin… taas keyword sax ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray ku dhowaad 200 booqasho bil kasta oo loogu talagalay raadinta ereyada muhiimka ah ka hor intaanan ka shaqeyn kor u qaadista. Kadib barnaamij SEO ah oo guuleystey oo geeyey # 1, taasi waxay u kortay in kabadan 1,000 booqasho bishii. Ereyga furaha keligiis ayaa kaliya ka dhashey booqashooyin fara ku tiris ah kahor iyo daraasiin kadib. Macaamiilku wuxuu cabirayay oo keliya ereyga saxda ah oo ma ahan dhammaan taraafikada la xiriira, taraafikada la xiriira.
Waxaa jiray 266 erey eray oo muhiim ah oo macaamilku ka helayay taraafikada barnaamijka kahor. Taasi waxay ku soo korodhay 1,141 weedho eraybixin la xidhiidha oo ay taraafikada kaga helayaan kor u qaadista boostada iyo hagaajinta. 1,141 raadinta ereyga muhiimka ah ayaa keentay in ka badan 20,000 booqdayaal cusub goobta. Markaad xisaabiso soo noqoshada in maalgashi, waa wax guul ah. Erayadaas waxaa loo yaqaanaa ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah, mararka qaarna waxaa jira macaamiil ka badan, lacag iyo fursad halkaas ka jirta oo aan lagula dagaallami karin tartanka ereyada muhiimka ah ee mugga badan leh.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in SEO uusan la mid aheyn iibsashada ereyga muhiimka ah ee PPC. Raadinta qaab-dhismeedka waxay fursad u leedahay inay ku kobciso taraafikadaada dhammaan shabakadaha weedhaha ereyada muhiimka ah ee la xiriira. Tani waxay muhiim u tahay istiraatiijiyadda mashiinka raadintaada. Haddii diiraddaada oo dhan ay tahay caarada barafka, dhag jalaq uma siinaynin tirada badan ee taraafikada ee ereyada raadinta ee la xiriira ay ku keenayaan.
Istaraatiijiyad kale halka ay arrintani ka taagan tahay ayaa ah raadinta deegaanka. Highbridge dhawaan waxay sameysay baaritaanka SEO shirkad adeeg ku saleysan oo ka shaqeysa qaran ahaan. Dhiirrigelintooda, waxyaabaha ay ka kooban yihiin, kala sarraynta boggooda - istiraatiijiyaddooda oo dhan SEO - keliya waxaa lagu bartilmaameedsadaa guud ahaan adeegyo ku saleysan iyada oo aan juquraafi ahaan la dhigin.
Tartamayaashu waxay cunayaan qadadooda - helitaanka a boqol jeer taraafikada sababta oo ah tartamayaashu waxay si caqli-gal ah u bartilmaameedsadeen juqraafi ahaan sida gardarada u ah mowduuca adeegga. Markii ay shirkaddani la shaqeynayeen kuwooda La-taliyaha SEO, Juqraafiga xitaa kuma imaan wadahadalka maxaa yeelay mugga raadintu muhiim ma ahayn. Xirfadlaha SEO wuxuu diirada saarey cirifka barafka… wuxuuna seegay 90% + ka yar, raadinta erayga juqraafiyeed.
Shirkaddu waxay ku jirtaa dhibaato have waxay haystaan ​​dhul badan oo ay ku dadaalaan inay sameeyaan haddii ay rajeynayaan inay hoggaamiye u noqdaan baaritaannada la xiriira adeegga. Xaqiiqdu waxay tahay in raadinta maxalliga ah ay tahay muddada koowaad markaad raadineyso adeegyada gobolka. Uma baahnid inaad “maydho baabuur” ka raadiso Google search waxaad raadineysaa xaafaddaada ama magaalada marka lagu daro “maydh baabuur”. Ma jiri karaan tiro aad u badan oo raadinta “Albuquerque car wash”… laakiin ku dar magaalo kasta oo Mareykanka ah baabuur maydh waana lambar weyn.
Waa caadi in istiraatiijiyad lagu jiheeyo cirifka cirifka, la cabbiro, la kormeero, oo loo habeeyo. Si kastaba ha noqotee, ha ilaawin inaad kaliya la shaqeyso caarada!
Habdhiska Fan Facebook